ကြက်သားငါးပိချက်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Home & Garden » ကြက်သားငါးပိချက်…
Posted by ကို ထွဋ် on Jul 24, 2014 in Home & Garden, Society & Lifestyle | 16 comments
ဂျန်န၀ါရီ နောလစ်... ပေါင်းစပ်မှု စွမ်းပကား...
ဒီတခေါက်ကတော့ အစီအစဉ်သစ်လေး… မိန်းမရယ် ကျွန်တော်ရယ် ချက်စားတဲ့ထဲက မထူးတထူး… မဆန်းတဆန်းပေါ့…
ဘာလို့ဆိုတော့ နေ့စဉ်စားနေကျပဲလေ… အိမ်မှာက ဟင်းချက်တော့စားတယ်… အမေချက်တာကို စားတာ ပိုများတယ်…
ကိုယ့်ဘာသာချက်မယ်ဆိုရင်တော့လဲ စိတ်ကြိုက် ကောင်းကောင်းလေးချက်စားကြတယ်… ကဲ.. လေဖောတာများပြီ… စချက်ကြမယ်…
အရင်ဆုံး ကြက်သားကို အလောတော်လေးတွေ တုံးရပါမယ်… ဒါက မိန်းမ အလုပ်…
ကြက်သွန်နီ/ဖြူ ဂျင်းလေးကို ရောထောင်းပါ… ဂျင်းကတော့ လက်ညှိုးတဆစ်လောက်ပေ့ါ… မထည့်လဲ ရတယ်… ဒါပေမဲ့ မွှေးတာပေါ့… မညပ်တညပ်ထောင်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့… ဒါက ကိုယ့်အလုပ်… ဟဲ
PS: မိန်းမက အသားလှီးတာ… မွှေတာ ချက်တာ တာဝန်ယူပြီးတော့.. ကျွန်တော်ကတော့ ဆုံထောင်းတာ ငရုတ်သီးညှပ်တာ.. အချိန်အဆ အရသာကို တည်းဖြတ်ပါတယ်… နှစ်သက်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်…
နောက်တပတ်တွေ ပြန်ဆုံဦးပါမယ်… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
သူ က သူ့ ဟာ သူ ပဲ တင်ချင်မယ် ထင် တယ် ကိုဂျီးးချို
ဘာကိုလဲဗျ.. ပြောပြလေ… ကိုယ့်ဘာသာလဲ တင်တယ်.. သူများဟာလဲ ၀ိုင်းတင်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်… ပြောပြပါ..
ဇီဇီက…. ရွာထဲ.. အဲ..မြို့ထဲ..စားသောက်ဆိုင်အကြီးကြီးဖွင့်ထားတယ်လေ..
စားဖိုမှုးတွေက.. ဟင်းတမယ်ဆီချက်ပြီး.. သူ့ဆိုင်တင်ရောင်းလေ့ရှိတယ်..။
ကျုပ်ကတော့.. အမေရိကားက.. အမေရိကန်-မြန်မာတွေကို.. ဇီဇီ့ဆိုင်နဲ့စာဖိုမှုးတွေမိတ်ဆက်ပေးပြီး.. သတင်းစာထဲ..လစဉ်ထည့်တယ်..။
အသားတွေ ငါးတွေကို.. မချက်ခင် အတုံးလိုက် အတစ်လိုက်..ကို..ကြည့်ရတာ..စိတ်မ၀င်စား..
(မကြည့်ချင် / ဖားသားနဲ့ … အမဲသား ဆို လှည့်ကိုမကြည့်ချင် )
ချက်ပြီးသား…( အတုံးသေးသေး) ကိုတော့… မစားပဲကို ထိုင်ကြည့်ပြီး..သွားရည်ကျချင်တာ…
ဘာပဲ..ဖြစ်ဖြစ်… ၀င် လေ့လာသွားပါတယ်လို့ ….
အတော်လေး ထမင်းမြိန် မဲ့ဟင်းဘဲ။
မိန်းမ ကို အတော်လေး မြတ်နိုးပုံရတယ် လို့ ထင်ရတယ်။
“မချစ်” လို့ နာမည်ပြောင်းပါလား။
နာမည် အတို မပြောင်း ရင်ပြောင်း မပြောင်းရင် ကဆာမိ လို ခေါ်လိုက်ချင်တော့ တယ်။ :-)))
ဟုတ်တယ်.. တုံးပြီးသားကို မရိုက်ဖြစ်လိုက်တာ.. ဓာတ်ပုံချွေတာတာလဲ ပါတယ်.. တော်ကြာ တဂျီးတင်းနေမှာ.. ခရီးထွက်တာ တင်တာ ပုံကို ရှယ်သုံးထားတော့ ပြန်ချွေတာပေးတာ.. နောက်တခါဆို တင်ပေးပါ့မယ်….
မြိန်တယ် အရီးခင်ရဲ့.. ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ သူ့လက်ရာ တမျိုး.. ကျွန်တော်က ကတ်ကြေးကိုက်ကြော်တာ.. ၁၂ မျိုးဟင်းချိုချက်တာ.. ကျွမ်းတယ်… မကြာခင်မှာ အိမ်မှာ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်ရင် ပလာတာနဲ့ ကြက်သားဟင်းချက်ရင် ထပ်တင်ဦးမှာ… ကြက်သားချက်ပုံချက်နည်းနဲ့ ထပ်တရာ ပလာတာကို တွဲ.. သခွားချဉ်လေး… ပဲဟင်းလေးနဲ့ စားချင်အောင် တင်ဖို့ရှိပါတယ်ဗျို့… မိန်းမကိုတော့ ချစ်တာပေါ့ဗျ.. ပေးစားတာ ယူတာ မဟုတ်ဘူးလေ.. ကိုယ့်ဘာသာကြိုက် ကိုယ်ဘာသာပိုက်ဆံရှာပြီး.. ယူထားတာ.. တော်တော်လေးကို ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်… အေးအတူပူအမျှမို့ ပိုချစ်ပါသတဲ့ဗျား… မယက မဟုတ်ဘဲ မယခ စာရင်းပါခင်ဗျား… မယားချစ်ကလေးပါ…
မြန်မာလိုလဲ ပါတယ်.. ယိုးဒယားလိုလဲပါတယ်..ကုလားလိုလဲပါတယ်… ကျွန်တော်က မြိတ်သားလေ.. ယိုးဒယားနွယ်တယ်.. အမေတရုတ်.. အဖေ ဗမာ ကုလားဆိုတော့… အစုံဟင်းချက်ပါတယ်ဗျား… အဖေလဲ ဟင်းချက်ကောင်း… အမေလဲ ဟင်းချက်ကောင်း.. မယားလဲ ဟင်းချက်ကောင်းပါ… ရုံးသွားရင် အဖေက ထမင်းအိုး တာဝန်.. အမေက ဟင်းတမယ်.. မိန်းမက ဟင်းတမယ်.. ကျွန်တော်က တမယ်နဲ့.. သွားပါသည်ခင်ဗျာ…
ခုတင်ထားတဲ့ ဟင်းတောင် မနည်းချက်ရတာ..
မနက် ၇ခွဲ ဖယ်ရီ ဂိတ်အရောက်.. ညနေ ၅ ခွဲမှ ရုံးဆင်း… ညစာစား.. ဈေးဝယ် .. အိမ်ပြန်ရောက်.. ၇ ခွဲ…
အ၀တ်လျှော်ရင် လျှော်.. မဟုတ်ရင် မီးပူတိုက်.. မဟုတ်ရင် ဆားဗစ်သွား… မဟုတ်ရင် မားသားကို မာဆတ်.. မဟုတ်ရင် ဟင်းချက်.. တမယ် ၂ မယ်နော်.. စနေဆို နေ့တ၀က်ပြန်.. ပရဟိတ စာသင်.. ယောက္ခမအိမ်မှာ အိပ်.. တနင်္ဂနွေ စာသင်… ၃ နာရီပြန်.. အိမ်ကို ၆ နာရီရောက်… လွယ်ပါဘူးဗျာ.. ဆိုင်မှာပဲ အစားများတယ်.. ဟင်းချက်လဲ အခုလိုက တခါတရံ စိတ်လိုလက်ရမှ.. မဟုတ်ရင် အလွယ်ချက်ကြတာ.. ဟင်းတမယ်လောက် ပိုဆိုရင်တော့ ပို့မယ်ဗျာ.. စိတ်ကတော့ ပါတယ်..
အာ့မျိုး ၇ ရက် စုထားလိုက်။
ဟင်းစပ် အတွဲ ဆို ပိုကြိုက်တယ်။ ဟင်းကောင်းစရာမလိုဘူးးး
ဟင်းစပ် ကောင်းရင် ကြိုက်တယ်။
ပြီး ရင် ပို့ပေါ့။ (စိတ်ပါရင်) khaingzw@gmail.com
ဒါမဲ့ အဲဒီ ချက်ပြုတ်တာတွေ ၇ မျိုးကို တော့ ဒီမှာ ပို့(စ) တော့ တင်လို့မရတော့ဝူးပေါ့။
ဒါပေမဲ့ စာဖိုမှူးက အဲဒီ ထမင်းဆိုင် ပို့(စ) က ကော်မန့်တွေ အကုန် ရီပလိုင်းလုပ်ပေးရမယ်။
ပို့(စ) တင်တာထက် ပိုတန်တယ် (တဂျီး မကြားစေနဲ့ သိလားးး)
ဘယ်လို.. အမေချက်တာရယ်.. မိန်းမရယ်.. ကျွန်တော်ရယ်.. နေ့စဉ်စားတာ တင်ရတာလား.. အိုကေလေ.. အသေးစိတ်သိရအောင်.. မေးလ်ကို အင်ဗိုက်လိုက်ပြီး.. ချက်ကြမယ်လေ… နော်.. ကူညီ.. အခုအင်ဗိုက်လိုက်မယ်…
၀က်၊ အမဲ မစားတဲ့သူမို့ ကြက်မျိုးစုံလင် ချက်စားဖြစ်ပေမယ့်…
ငပိချက် ဆို ငါးနဲ့ဘဲ ချက်ဖူးတယ်…
အိမ်ကလဲ ခြေလေးချောင်းရှောင်တယ်.. ကျွန်တော်မပါဘူး.. ဟီး.. လုပ်စားကြည့်လေ… ပဲပုတ်မရှိလဲ.. ရတယ်.. ငါးပိထောင်းနည်းတော့ နောက်နေ့တင်ပေးမယ်… စားကောင်းတယ်.. အစပ်မကြိုက်ပေမဲ့.. အဲဒါတော့ ကြိုက်တယ်… ;)
အင်မတန်သွားရည်ကျစရာ အစီအစဉ်လေးမို့ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ…ကြက်သားငါးပိချက် ချက်စားဖူးပါတယ်
နည်းတော့မတူဘူးပေါ့လေ…ခီများနည်းက ပိုအရသာရှိမဲ့ပုံပေါ်တယ်ဗျ …အားပေးပါတယ်
ဟဲ.. ချက်စားကြည့်ပေါ့.. အခု ဇီဇီတို့ ထမင်းဆိုင်အတွက် ဟင်းတမယ်ပို့မလားပဲ…
ချက်ပြီး ပို့ရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော်…